नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो नारा र प्रचार मात्रै : डा. महत «
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमाई परिस्कृत नभएको निबन्धको संज्ञा दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार गरेको साक्षात्कारमा नेता डा. महतले नीति तथा कार्यक्रम आगामी एक वर्षका लागि भए पनि सरकारले धेरै महत्वकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमै वर्षौं लाग्ने दाबी गरे ।
नेता डा. महतले सरकारले आफ्नो चरित्र सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पनि आरोप लगाए । “यो सरकार कामभन्दा प्रचारमुखी छ । यसले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै प्रोपोगाण्डा छन्,” उनले भने, “संसद्मा दुई घण्टा लामो भाषण गरियो, यति लामो भाषण त नेपालको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन ।” उनले ‘नेपाल सरकार’ भन्नुपर्ने ठाउँमा पटक–पटक ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गर्नुमा राष्ट्रपतिको दोष नभएर सरकारको दोष भएको पनि स्पष्ट पारे ।
नेता डा. महतले नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो २५-३० वर्षको इतिहासमा १६–१७ वटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको भन्दै आफूहरूले कहिल्यै पनि नेताका नाममा धेरै कार्यक्रम नल्याएको बताए । विपीको नाममा एक-दुई वटा अस्पताल, शिक्षालगायतका कार्यक्रम ल्याए पनि अरु कुनै घोषणा नगरिएको उनको भनाइ थियो । उनले अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा धेरै कार्यक्रमहरू ल्याइएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “कतिपय कार्यक्रमहरू त प्रचारमुखी छन् । कतिपय सरकारले गरेका कामका दाबीमा पनि सत्यता छैन्,” उनले भने, “सरकारले सबैखाले संक्रमणकालिन अवस्थाको अन्त्य भयो भनेर दाबी गरे पनि यसमा कुनै सत्यता छैन ।”
उनले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको पनि समस्या रहेको बताए । “तीन तहको सरकारबीच अधिकारको विवाद छ । क्षेत्राधिकार के हो भन्ने विवाद छ,” उनले भने, “संविधान कार्यान्वयनको पनि संक्रमण अझै बाँकी छ ।” उनले सरकारले फजुल खर्च रोक्न नसकेको र बजेटको दुरूपयोग धेरै भएको पनि टिप्पणी गरे । नेता डा. महतले चार वर्षअघिदेखि सुरु गरिएको वीरगन्ज–रक्सोल पेट्रोलियम पाइपलाइनको कामलाई पनि यही सरकार आएपछि गरेको भनेर अनावश्यक दाबी गरेको आरोप लगाए ।